ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံ အမိုက်စားလေးတွေ ရိုက်ချင်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၁၆) ချက် Part (2) - iOS Banker Myanmar
အခုနောက်ပိုင်း မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ ကင်မရာတွေ ပါဝင်လာတာနဲ့အမျှ social media တွေပေါ်မှာလည်း ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ပလူပျံနေကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ ကင်မရာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းလာကြပါစေ ကိုယ့်ရဲ့ ကင်မရာကိုကောင်းကောင်း အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်
(ဒါမှမဟုတ်) ကင်မရာအကြောင်း နားလည်သည့်တိုင် ဓါတ်ပုံပညာ အယူအဆတွေကို နားမလည်ပဲ တွေ့ရာမြင်ရာ ဒီအတိုင်းပဲ လျှောက်ရိုက်နေအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရိုက်တဲ့ပုံတွေ ပိုပြီးထူးခြားကောင်းမွန်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သို့သော် သင်ကိုယ်တိုင်က ရိုက်ကူးပုံ နည်းစနစ်တွေကိုသာ ကောင်းကောင်းနားလည်မယ်ဆိုရင် သင်ထင်မှတ်မထားလောက်အောင် အမိုက်စား ပုံလေးတွေကို ရိုက်နိုင်လာမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Mobile Phone Photography ဆိုင်ရာ နည်းလမ်း (၁၆) ခုကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်
အချက် (၁၆) ချက်ရှိတာကြောင့် Part ( 1 ) Part (2) ခွဲပြီး Part တစ်ခုကို ( ၈ ) ချက်စီ ခွဲတင်ပေးသွားပါ့မယ် ယခုPost က Part (2) ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) ပုံထွက် ကြည်လင်ပြတ်သားစေဖို့ သင့်ရဲ့ ကင်မရာကို အတတ်နိုင်ဆုံး ငြိမ်အောင်ထားရိုက်ပါ။
သင်က ပုံတစ်ပုံကို ရိုက်ယူနေချိန် ကင်မရာ လှုပ်ရှားသွားပါက ထွက်လာတဲ့ပုံဟာ ဝါးသွားနိုင်ပါတယ်။
အလင်းအားများတဲ့အချိန်မှာ ကင်မရာက sensor ဆီ အလင်းရောင် အလွန်အကျွံမဝင်ရောက်အောင် shutter speed အမြန်ကို အသုံးပြုတာကြောင့် အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ကင်မရာ အနည်းငယ်လှုပ်ရှားသွားတာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အလင်းအားနည်းတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကင်မရာ sensor က အလင်းရောင် လုံလုံလောက်လောက်ရရှိအောင်shutter speed ကို ပိုပြီး ကြာကြာဖွင့်ပေးထားရပါတယ်။
အဲဒီလို ဖွင့်ပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်း ကင်မရာ လှုပ်ရှားသွားပါက သင့်ရဲ့ပုံဟာ ဝါးသွားမှာပါ။
ဒါကြောင့် ညဖက် (သို့) အလင်းအားနည်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ကင်မရာကို ငြိမ်နေအောင်ထားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အကောင်းဆုံးက အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ tripod တွေကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
သင့်မှာ tripod မရှိဘူးဆိုရင်တော့..
သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို မျက်နှာပြင်အမာပေါ်မှာ တင်ပြီး နံရံ၊ စာအုပ်၊ ကျောက်တုံး စတဲ့တစ်ခုခုပေါ် မှီပြီး ထောင်ထားတာ၊
ဖုန်းကို ပိုပြီး မြဲမြံအောင် လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်ရိုက်တာ၊ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သစ်ပင်၊ နံရံ စတာတွေမှာ မှီပြီးရပ်တာ၊ လက်မောင်းတွေ မလှုပ်ရှားအောင် တံတောင်ဆစ်ကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကပ်ထားတာ၊ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် (သို့) ဒူးထောက်ပြီးရိုက်တာ စတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ ကင်မရာကို ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီး ရိုက်သင့်ပါတယ်။
(၁၀) ကိုယ့်ရဲ့ ပုံတွေကို ထူးခြားမှုရှိအောင် မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်တွေကနေ ပြောင်းလဲရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
လူအများစုက ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ဖုန်းကို ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ဘတ်နားလောက်ကနေ ချိန်ရွယ်ပြီး ဒီအတိုင်းပဲ ကိုင်ရိုက်လိုက်ကြတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံအများစုဟာလည်း ပုံမှန်မြင်နေကျ ရှုထောင်တစ်ခုတည်းက ပုံတွေပဲဖြစ်နေလို့ သိပ်ပြီး ထူးခြားမှု မရှိကြပါဘူး။
အကယ်၍သာ ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကို မတူတဲ့ ရှုထောင့်တစ်ခုကနေပြီး ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အများနဲ့မတူပဲတစ်မူထူခြားနေတဲ့ပုံတွေကို ပိုမိုရရှိလာနိုင်မှာ အမှန်ပါပဲ။
တချို့ပုံတွေဟာ ရှုထောင့်အနိမ့် (low angle) ကနေ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနိုင်တာမို့ သင်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၊ ဒူးထောက် (သို့) လိုအပ်ရင် မြေပြင်ပေါ် ဝမ်းလျားမှောက်၊ လှဲချပြီး ရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
တချို့ပုံတွေကတော့ အပေါ်စီး (vantage point) ကနေ ရိုက်ရင် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ အမြင့်တစ်နေရာကနေတက်ပြီး ရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
သင့် subject ကို အနီးကပ် အသေးစိတ် (detail) တွေပေါ်အောင် frame အပြည့် ရိုက်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အကွက်အပြောက်တွေနဲ့ စိတ္တဇဆန်ဆန် (abstract) ပုံရိပ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် frame withinaframe လိုမျိုး composition နည်းစနစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး မုခ်ခုံး၊ ပြတင်ပေါက်၊ တံခါးမကြီးတွေကို frame အဖြစ်အသုံးပြု ရိုက်ကူးနိုင်သလို..
ရေစက် နဲ့ နှင်းပွင့်လေးတွေ တစ်ပိုင်တစ်စ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ မှန်ချပ်တွေကနေတစ်ဆင့် မြင်တွေ့ရတဲ့ ပန်းချီကားဆန်ဆန် ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။
(၁၁) ပုံရိပ် အလင်းပြန်မှု (reflection) တွေကို ရှာဖွေ ရိုက်ကူးပါ။
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ ရေအိုင်၊ ရေကန်၊ မှန်ချပ်၊ နေကာမျက်မှန်၊ ဝိုင်ခွက်၊ ပြောင်လက်နေတဲ့ သတ္တုမျက်နှာပြင် စတာတွေမှာ ပုံရိပ်ထင်ဟပ်မှု (reflection) တွေကို လိုက်လံရှာဖွေ ရိုက်ကူးသင့်ပါတယ်။
ရေကန်တစ်ကန်ပေါ်မှာ ထင်ဟပ်နေတဲ့ တောင်တန်းတွေရဲ့ reflection ဟာ ရှုမောဖွယ် landscape ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်နိုင်သလို၊ မိုးရွာပြီးကာစ လမ်းမပေါ်က ရေကွက်တစ်ကွက်ပေါ် ထင်ဟပ်နေတဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခုဟာလည်း street ပုံကောင်းတစ်ပုံကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ အဲဒါတွေကို အဆင်သင့်ရှိမတွေ့ခဲ့ရင်လည်း သင့်မှာ ပါလာတဲ့ မှန်ချပ်၊ မျက်မှန် (ဒါမှမဟုတ်) ပါလာတဲ့ရေဘူးထဲကရေတွေကို ကိုရိုက်ချင်တဲ့ subject နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အကွာအဝေးမှာ လောင်းချပြီး ရေကွက်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ reflection တွေကို ဖန်တီးရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။
(၁၂) ကြည့်ရှုသူတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ subject တွေဆီ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မဲ့ leading line တွေကို အသုံးပြုပါ။
Leading line တွေဟာ ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ မျက်လုံးကို foreground ကနေ background ထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့အပြင် ပုံတစ်ပုံရဲ့ depth of field ကိုလည်း အားကောင်းစေပါတယ်။
အဲဒါတွေက တောလမ်းလေးတစ်လမ်း၊ မြစ်တစ်စင်း၊ လမ်းမကြီးတစ်ခု၊ ရထားလမ်းတစ်လမ်း၊ ခြံစည်းရိုးတန်း၊နံရံတစ်ခု၊ တံတားတစ်စင်း (သို့) သစ်ပင်အစီအတန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သလို..
သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ ထင်ကျန်နေတဲ့ ခြေလှမ်းရာလေးတွေ (သို့) ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ရိုက်ခတ်နေတဲ့ အဖြူရောင် လှိုင်းကြက်ခွပ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲဒီ leading line တွေဟာ သင့်ရဲ့ subject ဆီကို ဦိးတည်လာနေတာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ သင့် subject ကနေအဝေးဆီ ထွက်ခွာသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၁၃) သင့်ရဲ့ subject ကို အကောင်းဆုံး ပေါ်လွင်စေဖို့ ပုံရဲ့ composition ကို အရိုးစင်းဆုံး ထားပေးပါ။
ပုံကောင်းတွေဟာ အများအားဖြင့် အရိုးရှင်းဆုံး composition တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပုံထဲမှာ ဖော်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများအပြားပါဝင်နေရင် ပုံဟာ ရှုပ်ထွေးနေတတ်လို့ ကြည့်ရှုသူတွေဟာ ဘယ်ဟာပေါ် အာရုံစိုက်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ composition ကို အရိုးစင်းဆုံးထားပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီတော့ composition ကို အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုထားပေးမလဲ?
ကျွန်တော် နည်းလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ပထမဦးဆုံး သင့်ရဲ့ ပုံထဲမှာ အဓိက subject တစ်ခုတည်းကိုသာ ဖော်ပြနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ဘာကြောင့်ဆို ပုံထဲမှာ subject တွေ ပိုများလေ ပိုရှုပ်ထွေးလေဖြစ်ပြီး အာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့ ပိုခဲယဉ်းလေမို့ပါ။
ဒုတိယအချက် အနေနဲ့ နောက်ခံ background က အရမ်းကြီး ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီး အာရုံနှောက်စရာ ဖြစ်မနေဖို့ပါ။
အဲဒီလို ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သင် ရှုထောင့်ပြောင်းပြီး ရိုက်ကူးဖို့လိုပါမယ်။
ဘယ် (သို့) ညာဘက်ကို အနည်းငယ် နေရာရွှေပြောင်း ရိုက်ကူးသင့်သလို..
ကောင်းကင်ကို ပိုပါဝင်လာအောင် ကင်မရာကို အောက်နိမ့်ပြီးလည်း ရိုက်ကူးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ subject ကို frame တစ်ခုလုံးထဲ ဝင်ရောက်လာအောင် အနီးကပ်ရိုက်ခြင်းဖြင့် ရှုပ်ထွေးတဲ့ နောက်ခံbackground ကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
(၁၄) Subject ကို ပိုပေါ်လွင်လာအောင် negative space ကို ထည့်ရိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ ပုံထဲမှာ ဘာမှမရှိတဲ့ negative space တွေ အမြောက်အမြား ထည့်ရိုက်ခြင်းဖြင့် subject ကို ပိုမိုပေါ်လွင်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလို minimalist ပုံအမျိုးအစားတွေမှာ ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ အာရုံကို ထွေပြားစေမဲ့ အကြောင်းအရာ များများစားစား မပါဝင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ ပြသထားတဲ့ subject ဆီကို တည့်တည့်မတ်မတ် ရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် လှပတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာတွေရောက်သွားလို့ ဓါတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်တဲ့အခါ လောဘကြီးပြီး အကုန်ပါအောင် လိုက်မထည့်နေပါနဲ့။
ကိုယ်ဘာကို ဖော်ပြချင်လည်းဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားပြီး အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသာ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးချင်းဖြင့် အရှင်းလင်းဆုံးနဲ့ ဖော်ပြမှုအားအကောင်းဆုံး ပုံတွေကို ဖန်တီးရိုက်ကူးကြည့်ပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
(၁၅) ထူခြားဆန်းသစ်တဲ့ ပုံတွေ ဖန်တီးပုံဖော်နိုင်ဖို့ external lens တွေတပ်ရိုက်ပါ။
သင့် ဖုန်းကင်မရာရဲ့ native lens တွေပေါ်မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ fish-eye နဲ့ wide-angle lens တွေအမြောက်အမြားရှိပါတယ်။
အဲဒီ add-on lens တွေဟာ သင့်ပုံမှာ ဆန်းသစ်တဲ့ အရည်အသွေး နဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရှုထောင့်တွေကို ပေါင်းထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ဖုန်းကင်မရာရဲ့ အရှေ့မှာ ကာဆီးပြီး အသုံးပြုရမှာမို့ external lens တွေဟာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး အသုံးတည့်မဲ့ lens တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
2. Moment Wide Lens for iPhone, Pixel and Samsung Galaxy
5. Olloclip Multi-Device Filmer’s Kit
6. CamKix Universal 3-in-1 Lens kit
7. Olloclip iPhone XR Macro Lens Kit
8. Bamoer 22x Telephoto Lens and Tripod
9. Apexel 8 in 1 lens and accessory kit with 18x telephoto
‌ဈေးနှုန်း နဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို အောက်က link မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၁၆) ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ကိုယ်ရဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှု အမြင်အတိုင်း edit လုပ်ဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ကင်မရာနဲ့ ရိုက်တတ်ရုံနဲ့ ပုံကောင်းတစ်ပုံရလာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ photographer တိုင်း သိကြမှာပါ။
Social media မှာ ပလူပျံနေကြတဲ့ ပုံတွေထဲကမှ
သာမန်ပုံတွေနဲ့မတူပဲ ထူးထူးခြားခြားကွဲထွက်ပြီး လူအများစိတ်ဝင်စားခံရတဲ့ ပုံတွေကို ဖန်တီးသူတွေဟာ..
ကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာအမြင်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ editing ပိုင်းမှာလည်း ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း ထူးခြားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ချင်တယ်ဆိုရင် editing အကြောင်းကိုလေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကင်မရာရဲ့ shutter speed နဲ့ ISO တွေကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မဲ့ third-party ကင်မရာ app တွေကိုအသုံးပြုပြီးလည်း professional camera တွေလိုမျိုး အနီးစပ်ဆုံးရအောင် လေ့လာရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Camera app တွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲက iPhone အတွက် Camera+ ဟာ အတော်လေး သုံးရအဆင်ပြေပါတယ်။
၎င်းမှာ manual mode ပါဝင်ပြီး shutter speed နဲ့ ISO တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သလို၊ Auto mode မှာ ထားရိုက်ချင်ရင်လည်း focus၊ exposure နဲ့ white balance တွေကို သီးခြား ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ကင်မရာအတွက် သိပ်ပြီးမသိကြပေမဲ့ iOS နဲ့ Android ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Adobe Photoshop Lightroom ဟာလည်း manual အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် DNG file တွေကိုလည်း ဖမ်းယူပေးနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာ အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့ အခြား မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် editing app အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၂) VSCO Cam
(၃) Photoshop Express
(၆) Live Collage
(၁၂) Visage Makeup Editor
(၁၃) Lightroom mobile
မှီငြမ်း : Lifewire, Hubspot, iPhone Photography School, Photography Life, Expert photography,